Ngura kuchembera bvunzo - Yuyao Jera Line Inokodzera Co., Ltd.
Ngura kuchembera bvunzo imwe inonzi Yemunyu mukamuri bvunzo. Bvunzo inofanidza mamiriro ekunze akasiyana, hunyoro hwakanyanya, ngura ine hukasha, tembiricha yakakwira kuti iongorore kusagadzikana kwehurosi yezvigadzirwa kana simbi yekupora zvikamu. Bvunzo iyi inotibatsira kuti tiongorore mhando yezvigadzirwa kana zvishandiso kuti uve nechokwadi chekuti chigadzirwa chinokwanisa kuzadzikiswa munzvimbo dzakasiyana dzakashata dzemamiriro ekunze.
Isu tinoenderera bvunzo idzi pazasi zvigadzirwa
-FTTH inodonha waya kiramba
-Aluminium LV ABC tambo mabhureki
-Stainless simbi bhendi
-Relevant simbi accessories
Kamuri yekuyedza yakagadziridzwa otomatiki, iyo inogona kudzivirira kukanganisa kwevanhu kuti ive nechokwadi chechokwadi uye kunyatso kuyedza. Bvunzo inoteedzera padyo nemamiriro ekunze emamiriro ekunze ane Corrosive ingredient: sodium chloride uye zvinokuvadza simbi fittings. Bvunzo iyi ndeimwe yeakakosha pazvinhu zvesimbi, kungofanana netension bhora waya, uye makomba ezvisungo zvinosunga, simbi zvikamu zvefibre optic splice yakavharwa.
Iyo ngura, tembiricha, hunyoro reshiyo uye nguva zvine zviyero zvakasiyana zvinoenderana nematanho EN 50483-4: 2009, NFC33-020, DL / T 1190-2012 yemagetsi ekuparadzira zvishongedzo, uye IEC 61284 yemusoro fiber fiber optic tambo, uye zvishongedzo.